Nhau - Chigadzirwa Zvigadziriso muChiso che COVID-19
COVID-19 Kunyange ichityisa, nguva dzematambudziko pamusoro pemakore dzakasimudzirawo zvimwe zvezvakavanzika zviyeuchidzo zvichiri kushandiswa nhasi. Kubva kuamburenzi yakagadzirwa mukati meMiddle Ages kubatsira varapi kusvika nekufambisa varwere nekukurumidza, kutora tepi panguva yeWWII kubatsira varwi kugadzirisa zvishandiso mupiniki, uye kunyangwe basa raIsaac Newton mukutanga calculus uye giravhiti vachiri 'kushanda kubva kumba' panguva yeGreat Denda reLondon, nyika uye zvepasi rose madenda ave hwaro hwekugadzirisa uye kugadzirisa mhinduro kumatambudziko enguva. Nekufambira mberi kwazvino kwenzira dzekuchenesa, masiki dzimwe nzira, uye nekuuraya kwese kwezvishandiso kukuchengetedza kubva pakubata nzvimbo dzakasiyana, denda razvino rekoronavirus rataridza kuti harisi rakasiyana.
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa kubuda mudenda razvino kwave kuve kwakasiyana kwekufukidza kumeso. Zvichida zvakakurudzirwa nekutanga kushomeka kwekurasa uye masikisi eN95 anokurudzirwa panguva dzekutanga nhanho, isu taona spike mune vanozvigadzirira vatengesi uye zvimwe zvinowachika uye zvinogoneka kumeso kuvhara mhinduro. Imwe ongororo ichangoburwa yakatoratidzira masikisi ekugadzira machira, akasungirirwa kuti abudirire kupfuura mabhanana kana masiki-masiki (senge N95) ane madonhwe ekukosora anofamba masendimita maviri chete kuburikidza neakafukidzwa, kana zvichienzaniswa nemamita matatu, uye masendimita masere, zvichiteerana.
Nesarudzo yekugadzira yekumeso kumeso kubva kumachira akadzoreredzwa, iyo Soffio yakavakwa kubva mupurasitiki yakadzokororwa, uye sarudzo dzakawanda dzinogadziriswazve dziri kuunzwa, idzi dzimwe sarudzo dzakasikwa mukumuka kwedenda rakagadzirira kuve nekusingaperi kwezvakatipoteredza kukanganisa uye mhedzisiro pane kusefa kwekuuya uye vagadziri vekugadzira mask. Vagadziri vakauya nechisiko kubatsira vatengi vavo, kazhinji mabhawa uye maresitorendi, vachikumbira mhinduro dzekugadzira uye dzinoshanda dzekubatsira mabhizinesi mukuvhurazve.
Kunyangwe iri nzira nyowani, inochengetedza zvakatipoteredza yekugadzira zvigadzirwa, zvishandiso zvakagadziriswa kuti tirambe takabatana, kana mhando nyowani matekinoroji senge NASA PULSE pendant iyo inodedera kana ruoko rwako ruchisvika pachiso chako, chirwere checoronavirus chakakurudzira mamwe mazano ekugadzira uye ekuvandudza. Zvichava zvinonakidza kutarisa izvi zvitsva zvichikura uye kuona izvo zvinogona kukura kuva amburenzi kana tepi tepi yeramangwana.
Ziso paInnovation ndeye pamwedzi kutarisisa tekinoroji nyowani, zvigadzirwa, uye maitiro.